3 SEGA Sonic lalao mamoaka ny angona mpilalao tsy miankina | Androidsis
Eder Ferreño | | Lalao Android, fiarovana, Tutorials
SEGA dia orinasa iray malaza amin'ny indostrian'ny lalao video. Efa ela koa izy ireo no nandefa lalao ho an'ny Android. Lalao izay nahitam-pahombiazana hatreto, indrindra noho ny vokany tsy mitongilana. Anisan'izany ny lalao Sonic, izay mahita fahombiazana lehibe. Saingy, nisy ny olana nipoitra tamin'ireo lalao ireo.
Toa, ny fahasimbana manokana amin'ny fiainana manokana sy fiarovana dia mety hiditra ao. Toa lalao Sonic telo no mifandray amin'ireo mpizara ivelany mamela ny angon-drakitra tsy miankina an'ny mpilalao ho azo. Ka mety maro ny mpampiasa voakasik'izany.
I Pradeo, orinasa iray miadidy ny fiarovana an-tserasera, no niandraikitra ny fampandrenesana ny SEGA momba ity olana ity. Satria io no lalao malaza indrindra amin'ny orinasa. Manokana, ireo lalao voakasik'izany dia Sonic Original sy ny Sonic Dash roa. Ireo lalao ireo dia hifandray amin'ireo mpizara 11 hanakalo data.
Ny lalao Sonic dia hifandray amin'ireo mpizara ireo amin'ny tanjona marketing. Satria amin'io fomba io no ahazoana vola ny lalao miorina amin'ny doka. Saingy, toa nandeha tamin'ity tranga ity izy ireo. Satria fantatro koa geolocate ny mpilalao, ka fantatra amin'ny fotoana rehetra misy azy io. Ho fanampin'izay, izy ireo koa dia mifanakalo fampahalalana amin'ny mpizara telo tsy voamarina.
Ka ny fahasembanana ara-piarovana amin'ireo lalao Sonic ireo dia tena izy. Araka ny nolazain'i Pradeo, ireo lalao SEGA telo ireo dia marefo ara-piarovana mihoatra ny 15. Olana iray amin'ny habe lehibe izay misy fiatraikany amin'ny mpampiasa maro manerantany.
Ny SEGA dia efa nampandrenesina momba ny olana amin'ireo lalao Sonic ireo. Ny orinasa mihitsy no namoaka fanambarana. Naneho hevitra izy ireo fa ho tompon'andraikitra amin'ny fanapahana andraikitra izy ireo ary manadihady momba ireo olana ireo. Ka manantena ny hamaha azy ireo haingana araka izay tratra izy ireo. Tsy maintsy miandry isika vao hahalala bebe kokoa momba ny toe-javatra misy ireo lalao Sonic ireo ary hijery ny fomba hamahan'ny SEGA izany toe-javatra izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » fiarovana » Lalao Sonic 3 no mamoaka ny angona mpilalao tsy miankina
Harry Potter: Hogwarts Mystery dia misy ao amin'ny Google Play sy APK ankehitriny